Tsy Fandriampahaleana eto Toamasina
Mpanendaka 7 haly, Ramatoa nangalatra tao amin’ny lapan’ny fitsarana
Ny faha telo ny volana aogositra 2016 lasa teo no niantso ny mpanao gazety ny teo anivony police central eto Toamasina. Ny mpitandro ny filaminana dia miezaka hatrany ny amin'ny fiarovana ny vaohaka sy ny fananany, somary nafampana ny farany volana jolay no resahina hoy commissaire Manitra.
Araky ireo vokatra azo ny 29 sy ny 30 jolay mpanendaka fito indray no voasambotra tao amin'ny bazary ankirihiry, ambolomadinika sy mangarivotra iny. Efa nigadra ny dimy tamin'ireo ary iray vao nivoaka tamin'ny alatsinainy voalohany volana aogositra teo efa karazany andiany mihitsy izy ireo amin'ny fanaovana izany asa ratsy izany. Ny mampalahelo dia misy mbola tsy ampy taona ny ankamaroany izy ireo, voarasika amin’ny asa fanao ratsy kao izao lasa mpanendakaka sy mpandroba amin’ny toerana betsak’olona.
NY TAO AMIN'NY FITSARANA INDRAY
Vehivavy iray indray no hita tamin’ny camera cach� nangalatra vitrine, izay fitaovana an’ireo namany mpivarotra manoloana ny lapan’ny fitsarana ihany satria io ramatoa io dia mpivarotra Jus sy compos� eo monoloana ny lapan’ny fitsarana ihany koa. Nambaran’ny ramatoa ty farany fa nisy nangalatra ihany koa ny fitaovan’ny entiny mivarotra tany aloha tany tany ka izay no nahatonga izy nagalatra ny hafa ihany koa. Mihariry asa fanaovand-ratsy eto Toamasina, mandry tsy lavo loha ny an-tokatrano, fitaintainana ny amin’ny mpivarotra, tsy tery lalana ny mpanao ratsy ka hatreny amin’ny lapan’ny fitsarana no tsy afe-bela amin’izany.
Efa natolotra ny fitsarana avokoa ireo ireo mpanendaka 7 sy ramato iray tratra nangalatra tao amin’ny fitsaranana ity.
(126) VAVIROA Marcelline : 01-08-2016 - 07:26